Vanodiwa Shamwari, Iye zvino kupfuura nakare kose, munguva ino yekushaiwa, kutsigirana Pamwechete isu tinofambira mberi nekutsungirira uye tarisiro pamberi pekusaziva. Sezvo isu tichishanda nesimba kudzivirira hutano uye hutano hwedu, tinoda kugovana nzira yedu yekudzivirira ...Verenga zvimwe »
Mhoroi, munhu wese, pane imwe yakanaka nhau kwatiri uye isu, isu takagadzira mbiri nyowani chimiro posture corrector-smart posture corrector. Mifananidzo yechitambi chako se, ...Verenga zvimwe »
Maererano nehuwandu, gore rega rega kune varwere vane 2,5,8 miriyoni vanorwara, 400000-800000 pagore kufa uye 86,5% kuremara chiyero. Zvinoenderana nehuwandu hwevamwe vaongorori, pakati pevarwere vakapukunyuka varwere, gumi muzana vakapora kushanda vasina hurema hwakajeka, 40% yakasiya kuremara kushoma, 40 ...Verenga zvimwe »
Nguva yekutumira: Kubvumbi-18-2019
Mhoroi, munhu wese, kune imwe yakanaka nhau kwatiri uye isu, isu takagadzira mbiri nyowani yekugadzirisa posture corrector. Mifananidzo yechitambi chako se, ...Verenga zvimwe »
Nomufaro kupemberera kushandira pamwe kweHongzhu yezvokurapa uye Rukang kusaina zvibvumirano pamasiricheya kugadzira. Iwo anotungamira kubva kumapato ese maviri, Mr. Yang uye Mr. Lv vanoenda kuwo uye vanovimbisa vanoedza nepavanogona napo kutsigira zvibvumirano zvakasimba. Kubva zvino zvichienda mberi, Hongzhu yezvekurapa inogona kugovera vhiri ...Verenga zvimwe »
Zvigadzirwa zvitsva zvinosvika-inflatable lumbar brace
Nguva yekutumira: Feb-20-2019
Mhoroi, munhu wese, kune imwe yakanaka nhau kwatiri tese, isu takagadzira inflatable lumbar brace. Kune 2 mavara ekusarudza. Mifananidzo yereferensi yako seiyi, Izvi ndizvo zvigadzirwa zvedu zvitsva, zvinogarika paunopfeka, uye zvinoshanda kwazvo pachiuno kurwadzisa. Iyo inflatable waistline inosanganisira ...Verenga zvimwe »
Zvigadzirwa zvitsva zvinosvika-super cervical mutsipa mutsipa weti
Nguva yekutumira: Dec-31-2018
Mhoroi, munhu wese, kune imwe yakanaka nhau kwatiri tese, isu takagadziridza super zvinyoro cervical mutsipa traction kifaa. Iko kune mana mavara ekusarudza. Mifananidzo yereferensi yako seiyi, Izvi zvigadzirwa zvedu zvitsva, zvinogarika paunopfeka, uye zvinoshanda kwazvo pakurwadziwa kwemutsipa kusunungurwa. Kurapa kwakanyanya ...Verenga zvimwe »
Mhoroi, munhu wese, kune imwe yakanaka nhau kwatiri tese, isu takagadziridza super zvinyoro cervical mutsipa traction kifaa. Iko kune mana mavara ekusarudza. Mifananidzo yechitambi chako se, Verenga zvimwe »
Nguva yekutumira: Mar-10-2018
Mhoroi, munhu wese, kune imwe yakanaka nhau kwatiri uye isu, isu takagadzira mbiri nyowani yekugadzirisa posture corrector. Mifananidzo yereferensi yako seiyi, Izvi zvigadzirwa zvedu zvitsva, zvinogarika paunopfeka, uye zvinoshanda kwazvo pane posture corrector. Ndinotenda kuti mune imwe nzwisiso: mune h ..Verenga zvimwe »
7 hunhu hwechikadzi kuchengetedza (2)
Nguva yekutumira: Jan-10-2018
Enderera Chipiri, kupfeka waistline kune zvimwe zvinotsigira uye kubereka basa. Kupfeka chakakodzera chiuno chinja chinogona kutamisa chikamu chehuremu hwemuviri wepamusoro kuburikidza nembabvu chiuno iliac pfupa. Iyo yekuputira simba uye yakagadzikana mudumbu mamhasuru anogadzirwa ne chiuno denderedzwa anogona als ...Verenga zvimwe »
7 maitiro ekudzivirira kwechiuno kwemukadzi
Nguva yekutumira: Jan-09-2018
Iyo Rumbar Rutsigiro yakawedzera uye yakawanda mukati mevakadzi vanogara, nekuti vakadzi vane kuenda kumwedzi, nhumbu, kubereka mwana, kuyamwisa uye humwe hunhu hwepanyama, uye hune hunhu hwezvirwere zvegynecological, saka kurwadziwa kwakadzika kumashure zviratidzo. Saka tingadzivirira sei chiuno chedu chakakodzera ...Verenga zvimwe »
Basa remutsipa wechibereko rehuro rinodzora uye nzira yekudzoreredza kurwadziwa kwemutsipa
Nguva yekutumira: Oct-10-2017
Vashandi vechizvino-chena vashandi vanochengeta misoro yavo pasi kwenguva yakareba, izvo zvinokonzeresa mhasuru kuseri kwemutsipa kuti dzisimbe zvakanyanya, uye dzichadzvinyirira simba rese rakapfupika pamapfupa e cervical vertebrae. Mushure menguva yakareba, ichaita kuti disc ye cervical vertebrae ibude, ichikonzera c ...Verenga zvimwe »